Vakoti Vanoti Vacharamba Vachishanda Mazuva Maviri Chete paSvondo
Sangano revakoti reZimbabwe Nurses Association, Zina, rinoti nhengo dzaro dzicharamba dzichishanda mazuva maviri chete pasvondo kusvika zvichemo zvadzo zvagadziriswa.
Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusanganoweHealth Apex Council, hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva ese avanotarisirwa sezvo nyika iri mushishi rekurwisa kupararira kwehutachiona hweCoronavirus.
Mutungamiriri weZina, VaEnock Dongo, vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezvehutano asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi.
VaDongo vaudza Studio7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemihoro yavo isina kukwidzwa.
VaDongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
VaDongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezvehutano vakawanda panguva imwe, vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19 zvakanyanya.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Doctor Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sevana chiremba vasingawirirani nekuti vanamukoti vashande mazuva mashoma sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezvehutano mari dzisingakwani.
Sachigaro wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulinus Sikosana, vabvuma kuStudio7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezvehutano asi vakati havana chekutaura panyaya iyi.
Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira uko vashandi vezvehutano vari kufa zvakanyanya nekuda kweCovid-19 nekudaro havasi kuzosviisa munataisireva kana pasina gadziriro yakakwana.